သင်သည် BRISTOL ပတ်လည်ရှိ VOI တစ်စီးကိုစီးနင်းပါကသင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြလိမ့်မည် - သတင်း
သင်သည် Bristol ပတ်လည်ရှိ Voi တစ်စီးကိုစီးနင်းပါကသင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြလိမ့်မည်
Voi ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းသည်မြို့တစ်ဝှမ်းလုံး ၀ န်းကျင်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး Voi ဝက်ဘ်ဆိုက်အဆိုအရ၎င်းသည်ဆူညံသံနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှစ်မျိုးလုံးမှကင်းဝေးနိုင်သည်။ Voi ကိုတီထွင်သူများကကျောင်းသားများအပြည့်ရှိသောမြို့တစ်မြို့ရှိလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကလေးများအားသာထုတ်ပေးတော့မည်ကိုသိခဲ့ရသည်။
Vois သည်ဘရစ်စတိုတွင်လူအများအပြားအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းသစ်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာလွန်ခဲ့သောသုံးလတာကာလအတွင်းတစ်ခုတည်းသောတရား ၀ င်လုပ်ဆောင်မှုသည်လမ်းလျှောက်ခြင်းများပြုလုပ်နေသည်။ သာယာလှပသည့်အတိုင်းဆိုင်းထိန်းတံတားသို့နောက်တစ်ခေါက်သွားရန်ကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ကြည့်ရှုနေတဲ့ကျိန်းသေပေါက်။
အချို့ကျောင်းသားများသည် Voi လူနေမှုပုံစံကိုကျင့်ကြံပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေသည်။ သင်တစ် ဦး Voi စီးလျှင်သင်အများဆုံးကျိန်းသေသည်ဤအမျိုးအစားတစ်ခုသို့ကျလိမ့်မည်။
အခြားခရမ်းလွန်ကျောင်းသားများသည်၎င်းတို့သည်အိမ်တွင်းဒေသများမှအမှန်တကယ်ဖြစ်သည့် အချိန်မှစ၍ ဟန်ဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့နာမည်က Hugo ပါ။ သူတို့သည်လည်းသူတို့၏စပီကာမှတဆင့်လေ့ကျင့်ခန်း blaring နေလျှင်အပိုဆုအချက်များ။
၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်များသောအားဖြင့် - တစ်ကိုယ်တည်းသွားလာလှုပ်ရှားမှုအပြည့်အ ၀ ဖြင့်သွားသည်
အခြေခံအားဖြင့်အမျိုးသမီး UoB လူ ဦး ရေ၏ ၈၀% ။ ဖြစ်ကောင်း Surrey ကနေ, အပြည့်အဝမြို့ပြ outfitters get-up, ဝတ်ဆင်သူမစကူတာကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အခါ Rah ကပြောပါလိမ့်မယ်အမျိုးအစား။ ဤနေရာတွင်သာရိုက်ကူးရန်စုဆောင်းရန်အတွက်သူတို့သည်လေ့လာရေးခရီးမှ TikTok ကိုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်အနည်းဆုံး ၁၈k အကြိုက်သည်မျှတလိမ့်မည်။
၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်များသောအားဖြင့် - Voi ကားရပ်နားရာနေရာများရှိဖုန်းကိုင်ဆောင်သူကိုသူတို့၏ iPhone 11+ အရွယ်သို့ဆွဲတင်ရန်တစ်သက်တာကြာသည်။
သင့်ကိုချက်ချင်း ick ပေးသောကောင်လေးများ
ယောက်ျားလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာတစ်ခုမှာဆိုင်ကယ်များပေါ်တွင်အလွန်မတ်တပ်ရပ်နေသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအစားစကိတ်စီးရန်ဟန်ဆောင်ပေးပါ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံး link ကို Voi တွင်တွေ့ခဲ့လျှင် (ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်အတူရှိလျှင်မဟုတ်လျှင်) သူ့ကိုသူ့ကိုအမှိုက်ပုံးထဲသို့ပို့လိုက်ပါလိမ့်မည်။
သူတို့ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် - Whiteladies လမ်းပေါ်တွင်သွားသောလမ်းတွင် * ick သည်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။
Voi အတူတူနေတဲ့စုံတွဲများ။ ငါ့အနာဂတ်ကဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါမလိုချင်ဘူး။ ဂစ်နှင့်ကောင်မလေးသည်တိုက်တဲန်းနစ်အက်ကွန်းတွင်နှစ်ထပ်စီးမှုကျူးလွန်မှုကိုကျူးလွန်နေကြသည်။ ဒီထက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့နေ့ရှိနိုင်မလား။ ဒီလူတွေဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်သွားမှာပါ။
၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်များသောအားဖြင့် - အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သော Clifton ကျေးရွာ၊ သူတို့၏မျက်မှောက်ခေတ်နတ်သမီးပုံပြင်တွင်နေထိုင်သည်။
လူတစ် ဦး '' သူတို့ကဘယ်နေရာမှာမဆို Voi ယူလျှင်အစဉ်အမြဲဖော်ပြထားခြင်းပါလိမ့်မယ် '' လူတစ် ဦး
အိုး, သင် Voi မောင်းနှင်ပါတယ်စောင့်ဆိုင်း? သူတို့ Instagram ကိုကျော်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပုံပြင်များ Snapchat မလျှင်အဖြစ်။ သူတို့မှာအသင်း ၀ င်တွေရှိတယ်၊ ပြီးတော့ Instagram ကို post တင်ဖို့ Strava မှာသူတို့ပြေးနေတာကို screenshot လုပ်တဲ့သူမျိုးလည်းသေချာတယ်။
၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်များသောအားဖြင့် - သူတို့တင်ထားတဲ့ပုံဟာတကယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးရှိလိမ့်မယ်။
စက်ဘီးလမ်းကြောင်း? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီလူတွေအတွက်လမ်းအလယ်လောက်ပဲ။ အဝေးပြေးလမ်းအမှတ်အသားနှင့်လုံးဝမသိသောကြောင့်၎င်းကိုဂရုမစိုက်ပါ။ ဖြစ်ကောင်းသူတို့ရဲ့မောင်းနှင်မှုသီအိုရီစမ်းသပ်မှုအောင်ခုနစ်ခုကြိုးစားမှုကိုယူ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအန္တရာယ်။ သူတို့မူးယစ်နေသောအခွင့်အလမ်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်မြင့်မားသည်။
Voi HQ ကိုတိုင်ကြားချက်ပေးသည့်မောင်းနှင်သူအမျိုးအစားကညွှန်ကိန်းများထည့်သွင်းရန်နှင့်စကူတာများသို့မီးအလင်းများဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ချစ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ လမ်းစည်းကမ်းချက်များကိုပြုံးရယ်ခြင်း၊ ကော်ဖီဆိုင်များဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသဖြင့်မြင်တွေ့ရသောအနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခအလုပ်သမားများအားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ဒီသတိပေးချက်တစ်ခုစဉ်းစားပါ။
ယင်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်များသောအားဖြင့် - ကားရပ်နားရာနေရာတွင်စမ်းသပ်ခြင်းတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး၊ မထွက်ခွာမီတွင်၎င်းကိုချိတ်ထားပါ။
သူတို့ယခုဘယ်မှာ 90210 သွန်း
စာကြည့်တိုက်မှ Voi သောလူ
Nerds ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်အသံ။ breakout room တစ်ခုလုံးကို online seminar များတွင်သယ်ဆောင်ပြီးသင့်မှတ်စုများကိုပို့ပေးမည့်သူ။ ဤယောက်ျားများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောရှုထောင့်အတွက် Vois ကိုစီး။ တုတ်အိတ်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကော်ဖီခွက်ကိုသယ်ဆောင်သည်။ သူတို့အတွက်ကောင်းပါတယ်
၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်များသောအားဖြင့် - ASS နှင့်မဝေးပါနှင့်
အဆိုပါ '' Cheeky Voi '' လူတစ် ဦး
ဤသူတို့သည်များသောအားဖြင့် Voi ကိုအသစ်အဆန်းအဖြစ်ရရှိရန်သူတို့သွားလိုသည့်နေရာအများစုသို့သွားကြသည်။ သူတို့သူငယ်ချင်းများအုပ်စုတွင်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်လူသိများကြပြီး Voi သည်တစ်စုံတစ်ခုအတွက်နောက်ကျနေလျှင်သို့မဟုတ် Whiteladies The Downs အထိလမ်းတစ်လျှောက်လုံးလမ်းလျှောက်ရန်နှောင့်ယှက်ခြင်းမခံရလျှင်သာဖြစ်သည်။
သူတို့ကိုတွေ့နိုင်ဖွယ်ရှိသည် - နောက်ကျလွန်းသောအခြားသူငယ်ချင်းနှင့်တရားမ ၀ င်စီးနင်းခြင်း
အဲဒီမှာဖြစ်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့ပေမယ့်ရိုးရိုးအများစုအားဖြင့်ဖျောင်းဖျခဲ့သည်။ တစ်ခုလုံးကိုအချိန် petrified ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်သက်သောအရာအားလုံးကို ဦး ထုပ်၊ ဒူးနှင့်တံတောင်ဆစ် pads များတပ်ဆင်ထားနိုင်သော်လည်းကြောက်စရာကောင်းသောယာဉ်မောင်းများ၏မုန်းတီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်မည်သည့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပစ္စည်းမဆို၎င်းတို့ကိုကာကွယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းတို့ကိုရှာတွေ့ဖွယ်ရှိသည် - စကူတာကိုကျောက်ခင်းလမ်းတလျှောက်ရှိဘီးတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
• Bristol Uni A Capella အုပ်စုသည် The Bristol Suspensions သည်ဗြိတိန်ဗိုလ်လုပွဲကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
• မျိုးသုဉ်းသည့်ပုန်ကန်သူအိမ်ရှင် Kill The Bill သည် Bristol City Center မှတဆင့်ဆန္ဒပြခဲ့သည်
• Bristol Uni သည်ကျောင်းဆင်းပွဲအားလုံးကို ၂၀၂၂ နွေ ဦး အထိရွှေ့ဆိုင်းသည်